कञ्चन शर्मा अनि पुरुष हिंसा ! - Ratopati
फेरि एउटा कुराले पुरुष हुनुमा ग्लानि तुल्यायो । तर ग्लानि धेरै दिन टिक्न सकेन । पुरुष प्रधान समाजले गर्दा महिला हिंसा बढ्यो भन्ने महिला अधिकारवादीको कुरामा विश्वास गर्दा कतिबेला पुरुष भएर जन्मेकोमा चित्त दुख्छ । हुन त चाहेर महिला हुने या पुरुष भइने हैन । तर बेलाबेला पुरुषप्रति हुने सानो कुरामा मन कुँडिन्छ । अस्ति पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भयो ।
मैले भगवानको मन्दिरमा गएर एक चित्त भएर प्रार्थना गरेको छैन । केही मागेको पनि छैन । मलाई थाहा छ, मन्दिर एउटा आस्था हो । जो परापूर्व कालदेखि मानिँदै आयो । त्यहाँभित्र सजिएर बसेका भगवानसँग माग्नुभन्दा म मेरा जन्मदिने बाआमासँग माग्दछु, जो अहिलेसम्म पाएको पनि छु ।
बाआमाबीच पनि म आमालाई बढी माया गर्छु । यति लेख्दै गर्दा बाले चित्त दुखाउनुपर्ने कारण छैन । किनभने बा पनि मेरा लागि भगवान नै हुन् तर बाको मन भुलाउने अनेक ठाउँ हुँदा आमा मलाई बोकेरै पानी पँधेरो गरिन्, घाँस दाउरा गरिन् । त्यसैले अलि बढी आमालाई माया गर्छु । यतिभन्दा मेरा बाले पीर मान्दैनन् । किनभने आमालाई मैले माया गर्दा मेरा बा पनि खुशी हुन्छन् । कारण श्रीमतीको हाँसोमा अझ बढी हाँसो थप्ने मेरै बा हुन् ।
यहाँ कुरा अलि बाङ्गिन थालेको महसुस गरेँ । कुरा महिला हिंसाका हुँदैछन् । पुरुषद्वारा पीडित महिलाका कुरा हुँदैछन् । पुरुष प्रधान समाजले पीडित महिलाका कुरा हुँदैछन । अस्ति एक दिन फेसबुकमा एउटा पोस्ट भेट्टाएँ । आदरणीय दिदी तथा नयाँ युगबोध दैनिककी प्रधान सम्पादक लक्ष्मी आचार्य दिदीले पोस्ट गर्नु भएको त्यो पोस्टले निक्कै सेन्टी बनायो । माथि क्याप्सन लेखेर भिडियो अपलोड भएको त्यो पोस्ट एउटी महिलामाथि भएको हिंसा थियो । कञ्चन शर्मा रेग्मीसँग एउटा टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताको थियो त्यो पोस्ट । घर पुगेर हेरेँ, आमा सँगै रोए । हो म पनि आमालाई अति माया गर्छु । अघि भनिहालेँ, मेरा लागि बाआमा नै भगवान हुन् । मेरी आमा उमेरकी अर्की आमा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदादिँदै रोएको म हेर्न सकिनँ, अनि आँखा रसाए । आँशु पुछेर कहानी आमालाई सुनाएँ । उहाँले पनि हेर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । अनि त्यो अन्तर्वार्ता आमालाई अनि बूढीलाई मोबाइलबाट देखाएँ । दुवैजना भावुक भएँ, आमाका पनि आँखामा आँशु रसाए । नजानिदो तरिकाले आमाले आँखा पुछ्नुभयो । बूढीले पनि उस्तै तरिकाले आँखा पुछी । त्यो भिडियो लगभग भाइरल नै बन्यो । फेरि एक पटक पुरुष भएकोमा आत्मग्लानि भयो । कञ्चनको अन्तर्वार्ता सुनेर, हेरेर नरुने कठोर मनका हुन् ।
दुई दिनपछि कञ्चनका पतिको बोली अनि उनीहरुको वास्तविकता पढ्न पाएँ । कञ्चनले दुनियालाई छलेको देख्दा अति रिस उठ्यो ।
अनि लाग्यो हामी कति भावनामा मात्र बग्दा रहेछौं भन्ने लाग्यो । वास्तविकता एकतर्फी मात्र सुनेर पुरुष प्रधान समाजलाई सराप्यौँ । ।
कञ्चनका पति भन्दै थिए– “म र मेरो परिवारमाथि अन्याय भयो । हाम्रो परिवार बदनाम गर्न षड्यन्त्र भयो ।’’ षडयन्त्र कसले गर्यो थाहा भएन तर कञ्चनको कुरामा आँखा चिम्लेर विश्वास गरेका हामी उनका पतिको कुरामा पनि शतप्रतिसत विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र अन्याय ठहर्ने छ ।
सोचौँ त ! ब्याचलर अफ नर्सिङ गरेकी महिला कसरी फोहोरको थुप्रोमा बस्न सक्छिन् ? श्रीमान लगायत घरपरिवारले गलहत्याएर निकाले पनि उनी सक्षम हुन्थिन् भने फोहोरको बाँस हुँदैन । यो त दुनियाँको मन जित्ने सरल उपाय मात्र थियो । अर्कोतर्फ त्यति पढेलेखेकी महिला आफ्नो हक अधिकारका लागि अड्डा अदालत किन धाइनन् ? साच्चै यो षडयन्त्र नै हो । सात वर्षसम्म फोहोरको बास बस्नेले किन अधिकार प्राप्तिका लागि अदालत गैनन् ?
अनलाइनले कञ्चनले अन्तर्वार्ताको समय बोलेका झुट कुराहरु बुँदागत रुपमा व्याख्या गरेको छ । जुन कुरा सजिलै पुष्टि पनि गरिदिएको छ । तर हामी त्यति बेला महिला हिंसा भयो भनेर सामाजिक सञ्जाल रङ्गाइरह्यौं ।
कञ्चनले भन्दै थिइन्, श्रीमानले रूपवती नभएर घरबाट निकालिदिए । हो पतिले रूपवती नभएर निकाले, के छोराहरु पनि आफ्नी आमा च्वाँक चाहन्छन् ? छोराहरुले वास्ता नगर्नुको कारण खै ? जन्मदिने आमा कुरुप भएकै कारण आमा भन्न लजाउने समाज हो र नेपाली समाज ?
हामी महिला हिंसाको खुलेर विरोध गर्छौ तर किन पुरुष हिंसामा भएको देख्दैनौँ ? पुरुषको सामान्य गल्ती ठूलो मुद्दा बनाउछौँ तर महिलाका जघन्य अपराध किन बाहिर निकाल्दैनौँ ? कञ्चनका पतिले भनेजस्तै कञ्चन चरित्रहिन आइमाई हुन भने यहाँ पुरुष हिंसा भयो । कारबाही कञ्चनलाई हुन पर्छ ।
सम्बन्द विच्छेद गरेर गएकी श्रीमतीलाई या आमालाई कुन हैसियतमा राख्ने भन्ने सम्झौता उसको परिवारको हो । तर कसैको आडमा अझ बढी अधिकार खोज्नु र छाडेको परिवारको बदनाम गर्दै हिँड्नु कानुन सम्मत हुँदैन होला ।
कञ्चनले टेलिभिजनमा आँशु झार्दा हामी सबै भावुक बन्यौँ तर घरमै बसेर बदनामीको दागले डिप्रेसनको औषधि खाइरहेका उनका पतिको आँशु कसले देख्ने ? कञ्चन अन्यायमा परेकी हुन् भने सरकारी स्तरबाटै उनलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । यदि उनको सबै नाटक षड्यन्त्रले भरिएको हो भने षड्यन्त्रमा सामेल सबैलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर रेग्मी परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ ।